कोरोना त्रास, सरकार, मिडिया र हाम्रो दायित्व
घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, १२ चैत
सरकारको सक्रियता र हाम्रो दायित्व विश्वभर तीब्र गतिले फैलिइरहेको कोभिड- १९ को नियन्त्रण संसारकै लागि चुनौतीको विषय बनिरहेको छ ।
चीनको वुहानबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरसले आज विश्व आतङ्कित छ । यस्तो बेलामा महाशकति भनिएकादेखि अतिविपन्न मुलुकसम्म निरीह बनेका छन् । यद्यपि, प्राकृतिक प्रकोपलाई झट्ट नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा पनि होइन तर यसको रोकथाम गर्न भने सकिन्छ ।
भाइरस ब्याक्टेरिया जस्तो होइन । यो अतिसूक्ष्म बिषाणुका कारण फैलिने हुन्छ र भाइरसको उपचारका लागि खोपको निर्माण गर्न नै समय लाग्न सक्छ । यसर्थ यसको नियन्त्रण वा रोकथामको उपाय भन्नु नै सचेत, सतर्क र सुरक्षित अनि सफा रहनु हो अहिलेलाई ।
धन, प्रविधि, जनशक्तिदेखि धेरै कुराले सम्पन्न अमेरिका, युरोपका जस्ता मुलुकहरू पनि कोरोनालाई जित्न सफल भएका देखिँदैनन् । हामी तेस्रो विश्वका मुलुकले सावधानी, होसियारी अपनाएर सफा, शान्त, स्थिर र सुरक्षित भएर बस्नु नै कोरोना जित्ने प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा झण्डै ६ सय व्यक्तिमा परीक्षण गरिएकामा २ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको र तीमध्ये १ जना रिकभर भएका तथा अर्का १ जनाको उपचार भइरहेको अवस्था छ । बाँकीको रिजल्ट नेगेटिभ आएको छ ।
समस्या देखिएकाबाट होइन, नदेखिएकाबाट हो । नदेखिएका भन्नाले यसबीचमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आएका तर परीक्षण नगरिएकाबाट हो । यसका लागि पनि सरकार कम्तीमा १ महिना पहिल्यै चनाखो हुनुपर्थ्यो- विदेशबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर जाँच गर्न । त्यो हुन सकेन ।
यसर्थ पनि अब कम्तीमा भारतले गरेझैँ कडाइपूर्वक ३ सातासम्म लकडाउन गरेर संक्रमित पहिचान गरेर आवश्यक सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।
भर्खरै नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको छ १ सातालाई । यो अत्यन्त अव्यावहारिक अवधि हो कोरोना पहिचानका लागि । तर, संक्रमण फैलिनबाट रोक्न भने यो अवधि पक्कै सहयोगी बन्न सक्छ । यसर्थ संक्रमित पहिचानका लागि कम्तीमा ३ साता लकडाउन अवधि बढाउन आवश्यक छ । सँगसँगै भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपाल प्रवेश गर्नेको भीड ठूलै देखिन्छ । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । हरेकजसो नाकामा कडाइपूर्वक प्रवेशमा रोक, प्रभावकारी स्वास्थ्य जाँच आवश्यक छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा यसबेला अत्यन्त महत्त्व दिनुपर्ने विषय हो । यस्तो बेला व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री अर्थात् पीपीईको अभाव भएको बाहिर आएको छ । यसलाई पूर्ति गर्नेतिर सरकारको पहिलो ध्यान जानुपर्छ ।
शंकास्पद तथा संक्रमितलाई राख्ने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन कक्ष तथा आईसीयूको व्यवस्था गर्नमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकार जागरुक हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यी काम यसअघि नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो तर हामीले (हाम्रो सरकारले) यसमा केही खेलाँची गरेको अवश्य हो तथापि अझै समय छ ।
काम तीब्रताका साथ गर्ने चुनौती पनि छ सरकारलाई । तर, गर्नै नसकिने भन्ने अवस्था छैन । यसबीचमा रक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको सक्रियता प्रशंसनीय छ तर अन्य जिम्मेवार मन्त्री, राष्ट्रसेवक, पेसाकर्मी, व्यवसायीले पनि सरकारको होस्टेमा हैँसे गर्न आआफ्नो ठाउँबाट सशक्त भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको व्यापक विकास र विस्तारका कारण संसार सानो गाउँमा रूपान्तर भएको छ । विश्वको कुनै पनि ठाउँका घटना, दुर्घटना तुरुन्त संसारभर फैलिन्छन् । तथापि, यस्ता घटना र दुर्घटनाबारे अफवाह, हौवा र नकारात्मक सन्देशहरू उत्तिकै फैलाइने गरेको छ । यसले समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा पनि बल्झाउने र आतङ्कित बनाउने काम बढी भएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालहरू, युट्युब, अनलाइन पोर्टल तथा अन्य मिडियाले यस्तो बेलामा संयमित भएर सामग्री, सूचना र सन्देश दिने बेला हो । विपद्लाई अझ विपदपूर्ण बनाउने होइन कि त्यसबाट बच्ने, बचाउने, सुरक्षित रहने, सचेत गराउने सामग्री प्रस्तुत गर्ने हो ।
अहिले विश्वका सबैजसो मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छन । यस्तो बेला मान्छेको दैनिक क्रियाकलाप ठप्प छ । काम गरिरहेका, व्यस्त जिन्दगी बाँचेका मानिसलाई यसरी घरको सीमामा खुम्चिएर बस्नु निकै गाह्रो हुन्छ ।
यस्तो बेला बरु सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, अनलाइन र युट्युब च्यानलहरूले, रेडियो तथा टेलिभिजनहरूले यी 'होम क्वारेन्टाइन'मा बसेकाहरूका लागि भुलाउने, समय कटाउने, पढ्ने, खेल्ने, सचेतता जगाउने, सुरक्षित हुने खालका सामग्री दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १२, २०७६, ०५:५४:००
प्रधानमन्त्रीज्यू ! रिमाल र अस्गरसँगै छन् चाैका हान्ने ४ मन्त्री, कारबाही हुन्छ ?
कहाँ छन् सङ्कटका बेला एनजीओ/आईएनजीओ ?
कोरोना कहरबाट मुक्ति: सतर्कता, सुरक्षा र सचेतता
भेटी छाडेर मास्क बाँडौँ